Haxxummaa miti hattummaadha. « QEERROO
Haxxummaa miti hattummaadha.
Qabsoon daandii walxaxaa keessa akka tartu gorsaawwaniifk itaaboota tokko tokkorraa akkasuma mudannoowwan ijaan argurra hubachuu danda’eera. Bu’aa ba’ii sana qaxxaamuranii kutanii akeeka mana bahan sana bira gahuun Qabsaa’aa tokko Obsaaf booree gaafata.
Nama obsa qabutu injifata,nama booree qabutu kaayyoo isaa cina dhaqqaba. Kaleessa dheengadda wareegamtoonnii Qeerroo Bilisummaa kanneen akka Dirribee Jifaar, Jagamaa Badhaanee, Gaaddisaa Hirphaasaa, Alaamayyoo Garbaa, Fikkf cichoominniif kutannoon isaanii kaayyoon lubbuu isaanii wareeganiif inni guddaan Oromiyaa ijaaruufi maqaa Oromiyaa addunyattii mul’isuuf Faajjii Oromiyaa Alabaa biyyatti addunyaatti agarsiisuuf ture. Xurree isaan irra ademaa turan xurree dhugaati, dhugaa qabatanii lafa dhugaa dhaqan ‘ ekeraan isaanii Daadhii haa dhugu’ jechaa nama gumaa isaanii baasu waaqayyoo nuun haa taasisu. Maarre ergama isaanii kana mul’ata isaanii, mul’ata wareegamtoota Oromoo kanneen Shiftaa Sumaaleen dhumanii sana galaana dhuunfaa sanatti darbatanii culluxxoo ofittummaa seensisuun
Nuti har’a gurraaf dhageettii hawwaasaa arganneef kan kaayyoof akeekaa kaleessaa dabsinu taanan, lafeen isaanii nuuf jedhee caccabe
eeboo ta’ee dhiigni isaanii biyya keenyaaf lola’e galaana ta’ee nu liqimsuu hubachuu nu feesisa. Qabsoon Oromoo yeroo tokko tokko haala
muraasa gaafa ilaalaan qabsoo biyya Naajeriya keessatti adeemsifamaa ture kan uummata Baafira wal fakkaata. Yeroo kanammoo akka uummata
Baafira uummanni keenya egeree dhabaa laata? nama jechisiisa. Gaafa ajjeefamnee, hidhamnee gumaa dhabuun keenyaaf kan gumaa baasuuf
ganamaa galgala muddamu jibbamee ari’atamee tuffatamu egeree keenyatu gara sanatti waan deema jiru fakkaata. Jilba keenyaatu akka jilba
ulfaa deemsa dadhaba. Lakki yoomiyyuu qabsoon Oromoo kan duuba deebi’u akka hin taanef kan fuulduratti tarkaanfatu ta’uusaa asumaan
dubbachuun barbaada. Jaallan, qabsoof manaa baanee jirru marti Irbuu keenya akka kudhaamatti mormattii dhabuun nurra hin jiraatu. Qabsoo
Oromoo akka ofitti akkasuma akka dhageettii danuu argatanitti qolee haqaaqanii dabsuuf yaaluun, hordoftoota kitilaan lakkaahachuuf
horfinee barbadeessuun Haxxummaa miti hattummaadha. Hattummaan eenyummaa ofii dabsanii kan hormaan bakka buusuu caalu hin jiru, nuti
har’a amantaan kan eenyummaa keenya gurgurru taanan daldala eenyummaa keessaa isa Hattummaan sirriiqudha. Dhibee amantaa bobaa jala keenyee kan abbaaf haadhaa keenya kaleessaa gadaa barbadeessuurra amantaan wal cirachuun haxxummaa sitti fakkaatus hattummaadha.
Qabsoon Oromoo maaf rincicaa ?
Qabsoon Oromoo wantoota danuuf gufatee duubatti utuu deebi’aa deemuu humna horatee socho’a. Hanga kana kan ijasaa arguun dadhabameef waan biraa miti, Ana malee kaawwaan hin beektaniin waan wal dhalee wal horuufi. Akkasuma qabsa’oonni lubbuu maraarsiifachuudha. Keessattuu kanneen qabsoo Oromoo qabanii fuulduratti butuu malan baqaan biyya isaanii hormaatti gatanii godaanuudha. Kun akkam nama aarsaa ? Biyya ofiif erga qabsaa’u ta’ee maa keessaa godaanuu ? Maa alatti wal funaanuu ? Dhugumatti qabsa’aan tokko hanga qabsoo tokko qabee deemutti biyya isaa keessa ruuqamee kan hin jiraanne taanan qabsoo sana keessaa akkuma biyyattii gadi lakkiseen dandeettiin waan guddaa
uummatasaaf dalaguu hir’ataa deema.
Egereen Oromoo Oromiyaa maal fakkaataa ?
Oromoon yoomuu abbaa dhugaati. Uummata addunyaarraan kan adda isa taasisu falaasamaa addaaf dhugaa qabatee socho’uusaati. Namni dhugaa qabu yeroof nii jibbima. Nii ari’atamas. biyyasaarraatti doorsifamuun yeroof waanuma jiru. Kun hiree Oromoos ta’e jira. Oromoon har’a artist jaallatuuf namoota qabsoo kana fardeessan danuu dhabaa jira. Kunis kaawwan Balaa diinaan irratti raawwatuuf kaawwan karaa baqaa. Baqataan danachuun Oromiyaa hangam hongeessaa ? Baqataan Oromiyaa keessaa lakkisuun danachuun gara alatti guuramuun bor namoota ija hawwaasa ta’an danuu of harkaa baasaa deema. Egereen Oromiyaa akka argamaa jirutti bor godaansaaf ajjeechaa diinaan waan haramee haxaahamee dhumu fakkaata. Baqataan Oromoof bu’aa hin qabu. Akka dhuunfattii siyyaasaanis ta’ee waan Oromoof dalageef qofa namni baqachuun akka dhuunfaatti namicha nii fayyada. Garuu uummaticha humaa hin gargaaru.
Nuti biyyarraa godaannee qabsoo tokko uummatichaaf qabsoo bu’aa buusu hin gumaachinu. Kanaafuu inni guddaan Qeerroo Oromoo irraa eegamu
baqattummaa balaaleffachuuf, akka Arbaattii guddisnee baqataa ilaaluu dhiisuudha. Har’a baqataan akka barbaade dirree guddaarraan beekameef
gaggeessaa keessani jechuun dhaadachuun kan dhufeef waan baqataaf bakka laachuun danateefi. Baqataaf bakka guddaan laatamuu hin qabu,
yoo baqataa tuffachuu dhiifte bakka laachuufii dhiisuun keenya hammi alatti baqatullee hir’ataa akka deemu taasisa. Namoonni qabsoo
uummatichaa hatuuf yaalaniis nii hir’atu. Abbaa qabsoof gaggeessaa qabsootu barama,. Humni ala waca heddummeessu akka humna keessaa hin
caalle mirkaneeffachuutu dhufa. Kanaan ala egereen Oromiyaa yeroo dhiyootti kaan baqattuun kaan ajjeechaaf du’aan Oromiyaarraa bahee
Oromoon baddi. Oromiyaan nii hongoofti, hongeen Karaa kaabaas daaraa taasisuu mala. Kanaaf Of haa ilaallu, hin godaannu. Tokko mana
hidhaatti gannee ofii baqachuun qaaniidha. Qabsoon gidiraa hin agarre qabsoo hin fakkaattu. Wal faana hidhamnee reebamnee tumamnee isa
boodaan ka’aa jiru diinatti qaruu baannaan, uummannii abdii dhaba.
Nama hawwaasni eeggatu, nama hawwaasni ittiin gaggeeffamu keessaa baanaan “sobdee nu fixuuf yaaltii” kan jedhutu horamaa deema. Amma
uummanni alaaf keessaa baay’inaan waan wal simuuf ka’u fakkaata. Maaf godaannaa ? Maaf baqannaa? Asumatti falmachuutu nu baasa malee
baqachuun keenya furmaata hin ta’u. Dantaan dhuunfaa yoo baqatan danata, yoo uummaticha keessa jiraatan dantaa dhuunfaa ajjeesuutu
dhufa. Qabsoo Oromoo Haxxummaatti danataa gaafa deemu Hattummaa ta’aa dhufe. Nuti dhaloota Haxxummaa gara hattummaatti jijjiru akka hin
taane Hattummaa gara haxxummaatti jijjiiruuf egeree Oromiyaa mariin lafa haa kaawwannu.
Horaa bulaa barruu “Qabsoof Sombi hargaansuu uummata ” jedhuun wal agarra
« Godina Arsii Magaalaa Saguree Keessatti Qophii Ispoortii Irratti FXG Ka’uu Mala Jechuun Warraanni TPLF Hedduminaan Bobba’e.
Waraannii fi Milishoonni TPLF Godina Arsii Aanota Mara Keessatti Walgahii Sardaa Irra Jiraachuu Qeerroon Gabaase. »